आश्चर्यजनक भिडियोः जिउँदो मुसाको घाँटीमा उम्रियो भटमासको बिरुवा, जरा भने जमिनमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आश्चर्यजनक भिडियोः जिउँदो मुसाको घाँटीमा उम्रियो भटमासको बिरुवा, जरा भने जमिनमा
के कुनै जिउँदो प्राणाीको शरीरमा बिरुवा उम्रन सक्छ । त्यसमाथि त्यो बिरुवाको जरा उसको शरीर पार गर्दै जमिनसम्म पुग्दा के त्यो प्राणी जीवित रहन सक्ला । सुन्दा निकै आश्चर्यजनक लाग्ने यस्तै घटना भारतको मध्यप्रदेशमा भएको छ । मध्यप्रदेशको रतलाम जिल्लाको सदरमुकामदेखि १४ किलोमिटरको दूरीमा रहेको नायन गाउँमा यस्तो आश्चर्यजनक घटना भएको हो ।
यो घटना बुधबार दिउँसो थाहा भएको हो । बुधबार दिउँसो किसानले भटमास रोपिएको खेतमा किटनाशक औषधी छर्न गएका बेला यस्तो आश्चर्यजनक घटना देखेपछि त्यसको भिडियो बनाएका हुन् । मुसा देखेपछि ती किसानले नजिक गएर हेर्दा निकै चकित परेका थिए किनकि त्यो मुसा चल्न त चलिरहेको थियो तर त्यहाँबाट कतै जान सकिरहेको थिएन । ध्यानपूर्वक हेर्दा त्यो मुसाको घाँटी छेडेर एउटा भटमासको बिरुवा उम्रिएको देखियो ।
खेतका मालिका दातासिंहका अनुसार उनले जब मुसाको पुच्छर समातेर उचाल्न खोज्दा त्यहाँबाट निकाल्न सकेनन् । बिरुवाको जरा मुसाको घाँटीको वारपार हुँदै जमिनसम्म पुगेका थिए । जरा माटोभित्र फैलिइसकेको थियो । त्यसपछि उनले मुसालाई बिरुवाको जरासमेत उखेलेर घर लिएर आए । उनले त्यहाँ भटमास छरेको ४० दिन भइसकेको थियो र त्यो बिरुवा पनि लगभग त्यत्ति नै दिनको थियो । मुसा अहिले पनि जीवित छ तर भटमासको बिरुवा घाँटीको वारपार भएकोले उसले घाँटी हल्लाउन भने सक्दैन । हेर्नुहोस् भिडियो –